Home Wararka Warar dheeraad ah Oo laga helayo Rag hubeysan Oo Lagu toogtay Muqdisho
Warar dheeraad ah Oo laga helayo Rag hubeysan Oo Lagu toogtay Muqdisho
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa toogtay rag hubeysan oo saarnaa gaari nooca raaxadda ah oo marayay Isgoyska Saybiyaano ee degmada Hodon.
Ciidamada dowladda ee toogtay ragga hubeysan ayaa watay gaari Cabdibile ah, waxaana la sheegay ka hor toogashadda in ay dhexmartay israsaaseyn.
Labada nin oo saarnaa gaariga Raaxadda ah ayaa dhintay , waxaana sidoo kale dhaawacmay Saddex Askari oo saarnaa gaariga Cabdi bilaha ah.
Hay’addaha Ammaanka dowladda Soomaliya ayaa goobta soo gaaray, waxaana ay halkaasi ka qaadeen dhaawaca Askarta, iyadoo wali kooxihii hubeysanaa ay Meydadkooda Midna uu dhulka yaallo Mid gaariga Saaran yahay.
Lama ogga Labada nin ay ee Ciidamada toogteen waxa ay ahaayeen.
Wixii kusoo kordha kala socoda halkan
Previous articleBooliska Rabshadaha ka hortaga Oo Lagu soo daadiyay Magaalada Jigjiga
Next articleMaamulka Somaaliland Maxay ka dhaheyn Xaalada ka soo Cusboonaatay Jigjiga?
Gudoomiyaha Cusub Ee Degmada Daayniile Jacfar oo Xoog u Adeegsanaayo Burburinta...